निषेधाज्ञा खुल्यो, कोरोनाबाट कसरी बच्ने ? - नेपालबहस
निषेधाज्ञा खुल्यो, कोरोनाबाट कसरी बच्ने ?
| २१:००:५५ मा प्रकाशित
घर नजिकको पसलबाट किन्ने, बसेर छान्ने, छाम्ने काम नगर्ने ।
तसर्थ आफुले बनाएको लिस्ट अनुसार फटाफट किनेर बाहिरिने, लामो समय नबिताउने ।
त्यति धेरै चल्छ, यो सुत्र सबैले अपनाउने ।